Casumaada shaqada oo laga ganacsado - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Casumaada shaqada oo laga ganacsado
ka ganacsi sharciga shaqada
La daabacay tisdag 28 augusti 2012 kl 11.09
Dadyowga ku hela sharciga shaqada hab qaldan ayaa ah dibaato ku soo badanaysa dalkaan Iswedhen. Sidaas waxaa ku doodaya hay'ada guud ee danbibaarista booliska "Rikskriminalpolisen", oo xataa qaba in dadyow ka ganacsan jiray isxanbaarka ay hada u gudbeen in ay gadaan casumaado shaqo oo been ah oo ku qaataan boqolaal kun oo karoon. Sören Clerton waa maamule sare oo ka tirsan Rikspoliskriminalen.
-Macluumaadkaan waa mid ka yimid hay'ada booliska, kaas oo ah macluumadka aan ugu wacno sirdoonka. Isku gegeyn waxaa noo soo baxday in arintaan tahay mid soo badanaysa. Waa si qaldan u isticmaal ay tahay in tilaabo sharciya laga qaado.
Sannadkii 2008 ayey hay'ad markii sharuuc cusob la dejiyey oo ku sabsan sidii loogu fudodeyn lahaa dadyowga ka soo jeeda dalalka ka baxsan EU in ay yimaadaan Iswedhen oo ay ka shaqeystaan. Waagii hore go'aanka ka gaarida ugu danbeysa waxaa iska lahaa laanta shaqada arbetsförmedligen, laakiin hada shaqobixiyaha ayaa iska leh cida uu rabo in uu halkaan keeno si ay ugu shaqeeyso. Balse wax ka badelida sharuucda ayaa keentay in ay badato si qaldan u adeegsiga nidaamkaan, taas oo shaqsiyaad u maraan in ay sameeyaan casumaad shaqo oo aan jirin balse qofka fiisaha shaqada la siiyo ka qaataan dhaqli fara badan.
Rodi Husein waa 25 sanno jir ka yemid dalka Suuriya lix bilood ka hor, labo goor oo hore ayuu isku dayey in uu dalkaas ka soo fakado isaga oo adeegsanaya muqalasiin balse isla labadaba booliska Turkiga ayaa qabtay. Lakiin markii sadexaad waxa uu ku guulaystay in uu si sahlan ku yimaado Iswedhen kadib markii uu ka gatay casumaad shaqo ruux ka qaatay lacag faro badan.
-Hadaad la leedahay xiriir qof shaqo haya oo waraaqaha soo buuxbuxsha, yiraahdana qofkaan in uu ii shaqeeyo ayaan rabaa, markaas wey ogolaanayaan dalabka, qofkana Iswedhen wuu imaanayaa. Laakiin lacag ayey joogtaa, markaan aan aniga rabay in aan imaado Iswedhen waxay arintaan lamid ahayd isxanbaarka oo kale balse waxay kaga gadisanayd kaliya diyaarad toos ah baad Iswedhen u soo raacaysaa, ayuu yeri.
Sören Clerton ma hayo tirokoob muujinaya inta ay la egtahay dadyowga habka qaldan u isticmaalka nidaamkaan, balse sida uu yeri qiyaas ahaan 15.000 ee fiisaha shaqo ee sannad kasta la bixiyo badankood habka saxa ayaa lug bixiyaa. Laakinse shaqsiyaad caan ka ahan booliska ayaa nidaamkaan ka faa'ideysta oo ka sameysta lacag faro badan.
- Dadyow aan garanayno oo ka ganacsan jiray isxanbaarka ayaa bilaabay in ay isticmaalaan farsamadaan. Waxaa nagu maqaalo ah in ay ka qaataan ilaa 250.000 oo karoon dadka loo sameeyo sharciyada shaqada Iswedhen, ayuu yeri.
Bishii Januari sannadkii hore ayey hay'ada socdaalka Migrationsverket bilowday in ay adkeyso sharuucdooda si ay ugu hortagto in si qaldan loo adegsado nidaamkaan. Xarumo badan oo shaqo ayaa lagu xiray shaqo-bixiyaha dalabka soo dirsada in uu bixin karo labo sanno mushaaraadka. Waxayna dhashay natiijo wanaagsan ayey qabtaa Nina Johansson oo ka howl-gasha migrationsverket.
- Adkeynta sharuucdaan waxay keentay in dalabyo badan la diido, madaama dalabyada casumaada shaqo aysan ahayn kuwo dhab ah, ayey tiri
Kontoroolka oo la badiyaa waa wax fiican ayuu qabaa Sören Clerton oo ka tirsan Rikskriminalen, laakiin waxa uu aaminsanyahay in loo baahanyahay wax ka qabasho intaas ka badan. Howlaha booliska ee la xiriira baarida arintaan ayaan ahayn kuwo sahlan ayuu sidoo kale Sören aaminsanyahay , maadaama aysan ahayn fiisaha waxa falsada ah balse ay tahay qaabka lagu baxshay fiisaha. Sidoo kale cinqaabta arintaan oo aan sidaas u weynayn ayaa keenaysa in booliska ahmiyad gooniya siinin arintaan.
Sören Clerton ayaan garanaynin hal qof oo maxkmad lagu soo istaajiyey laguna xukamay ka ganacsiga sharciga shaqada. Ka boolis ahaana waa mid asaga cadho iyo nijab ku ah.